११ जेठ, काठमाडौँ । आईपिएलको इतिहासमा सबै भन्दा बढि जित निकाल्ने टिमहरुको नाम यसप्रकारको छ:
१. मुम्बई इंडियन्स
आईपिएलको टिम मुम्बई इंडियन्स यस सुचिका पहिलो स्थानमा रहेका छ । मुम्बई इंडियन्सले आईपिएलमा १८७ खेल खेलेको छ । १८७ खेलमा मुम्बई इंडियन्सले १०७ पटक जित हासिल गरेको छ । मुम्बई इंडियन्सले ४ पटक आईपिएलको उपाधि समेत जितेको छ ।
२. चेन्नाई सुपर किंग्स
चेन्नाई सुपर किंग्स यस सुचिको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । चेन्नाई सुपर किंग्सले आईपिएलमा १६५ खेल खेलेको छ । १६५ खेलमा चेन्नाई सुपर किंग्सले १०० पटक जित हासिल गरेको छ । चेन्नाई सुपर किंग्से ३ पटक आईपिएलको उपाधि समेत जितेको छ ।
३. कोलकत्ता नाइट राइडर्स
कोलकत्ता नाइट राइडर्स यस सुचिको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । कोलकत्ता नाइट राइडर्सले आईपिएलमा १७८ खेल खेलेको छ । १७८ खेलमा कोलकत्ता नाइट राइडर्स ९२ पटक जित हासिल गरेको छ । कोलकत्ता नाइट राइडर्सले २ पटक आईपिएलको उपाधि समेत जितेको छ ।
४. रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोर
रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोर यस सुचिको चौथो स्थानमा रहेको छ । रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले आईपिएलमा १८१ खेल खेलेको छ । १८१ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले ८४ पटक जित हासिल गरेको छ ।
५. किंग्स इलेवन पंजाब
किंग्स इलेवन पंजाब यस सुचिको पाँचौँ स्थानमा रहेको छ । किंग्स इलेवन पंजाबले आईपिएलमा १७६ खेल खेलेको छ । १७६ खेलमा किंग्स इलेवन पंजाबले ८० पटक जित हासिल गरेको छ ।
त्यसैगरि डिल्ली क्यापिट्ल्सले १७७ खेलमा ७६ जित, राजिस्तान रोयलर्सले १४७ खेलमा ७३ जित र सनराइजर्स हैदराबादले १०८ खेलमा ५८ जित निकाल्न सफल भएको छ ।